UBETHENNY FRANKEL UNIKEZELA NGOHLAZIYO KWIZICWANGCISO ZOMTSHATO - IINDABA
UBethenny Frankel unikezela ngoHlaziyo kwiZicwangciso zoMtshato
UBethenny Frankel ubandakanyekile ukuba ngumhle uPaul Bernon, nangona kunjalo ngabafazi basekhaya bangaphambili beNew York bacwangcisa ukutshata ngokukhawuleza? Akunjalo kanye. Kwi udliwanondlebe noMarie Claire , UBethenny utyhile ukuba ngenene akayi kwisibingelelo nangaliphi na ixesha kwikamva elikhawulezayo.
Akubonakali kufanelekile, kufanelekile ngoku, utshilo uBethenny. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba engabaleki ezantsi ayithethi ukuba akakhululekanga ngokungaqhelekanga ukuba azibandakanye.
Ndonwabile kakhulu, kwaye intle kakhulu, uBethenny uxelele i-ExtraTV emva kokuba ulwazi lokuzibandakanya kwakhe lwaphuka.
UBethenny noPaul bafumana ukuzibandakanya kwiinyanga nje ezimbini emva koqhawulo-mtshato lukaBethenny kumyeni owayesakuba ngumyeni wakhe uJason Hoppy. Ngokwiphepha lesithandathu , ukhetho olutyikitywe kuqhawulo mtshato ngoJanuwari 2021, kwiminyaka esibhozo emva kokuba uBethenny noJason behlukene. Ngo-Matshi 2021, uBethenny waqatshelwa eshukumisa iringi enkulu yedayimani elunxwemeni lolwandle eFlorida.
U-Bethenny noPaul baye bathandana ukusukela ngo-2018. Aba babini bahlukana ngokufutshane kwi-2020, nangona kunjalo bafumana kwakhona ngokudibeneyo emva kwexesha elincinci.
Nantsi into ekufuneka uyazi:
UBethenny akaqinisekanga ukuba ufuna ukutshata eNew York
UBethenny akabonakali emangalisa ekucwangciseni umtshato wakhe ozayo. Emva kokushiya oomama bokwenyani baseNew York, ebegxile kumashishini ohlukeneyo. Inkwenkwezi yokwenyani yazisa uMarie Claire ukuba ekugqibeleni angathanda ukufikelela kwindawo angekho kuyo kumabonakude, nangona kunjalo kufanele ukuba kufike ixesha elithile emva komboniso wakhe omtsha othi The Big Shot With Bethenny uqhuba ikhosi.
Ingqokelela entsha yokwenyani ikhonkxiwe njengokhuphiswano lweshishini olukhuphisanayo kwaye inokuqala kwi-Epreli 29, 2021, kwi-HBO Max.
Okwangoku, ubomi babucala bukaBethenny bubonakala kwindawo entle kakhulu. Umsunguli weSkinnygirl ulwahlula ixesha lakhe phakathi kweNew York, iGreenwich, iConnecticut, kunye nedolophu enkulu kaPaul eseBoston, eMassachusetts. Oku, enyanisweni, kuvula umbuzo malunga nendawo uBethenny noPaul abazakufumana betshata- xa ixesha lichanekile, enyanisweni.
Ngexesha lodliwanondlebe kunye ne-ExtraTV, uBethenny wacelwa ukuba angaba nomsitho womtshato wakhe eNew York. Andiqinisekanga. Andiqinisekanga. Ndiyathetha, ndiyayithanda iNew York. Andiqinisekanga, utshilo.
Iringi yokuzibandakanya yaseBethenny inokuba nexabiso elingaphezulu kweedola ezili-1 zezigidi
Akukho mfihlo yokuba umsesane wokuzibandakanya kukaBethenny uyamangalisa. Ngokutsho kwephephancwadi i-People I-emerald ukunciphisa ilitye eliphakathi kunokuba ngaphezulu kwe-15 carats. Ingcali yeDayimani uMike Fried uxelele iplagi ukuba iringi inokuba nexabiso elingaphezulu kweedola ezili-1!
Ngomlinganiso wayo omhle kunye nohlobo oluhle, umsesane kaBethenny yintsimbi kubudlelwane bakhe noPaul Bernon kunye nekamva labo ngokudibeneyo, uFried wazisa indawo.
Ngaphandle kokubethwa othandekayo kwisandla sakhe sasekhohlo, uBethenny unesandla sakhe kwimicimbi eliqela ngoku, kwaye ucwangciso lomsitho womtshato aluvakali njengelinye phakathi kwabo. UBethenny noPaul banokukhetha ukuba baphume - ngubani owaziyo? -Kodwa ke uza kwenza imiba kumabinzana akhe, engomnye umba uBethenny asele egqibile ngalo lonke ixesha.
Ngaphezulu kwayo yonke enye into, uBethenny ngumama. Intombi yakhe eneminyaka eli-10 ubudala uBryn uya kudlala indima enkulu nokuba uBethenny noPaul bazimisele ukuyenza kungekudala okanye kamva-ngokunxulumene nomsitho womtshato-kunye nexesha elidlulileyo.
ngubani oye wavota kwilizwi
Okunzima ngakumbi koomama bokwenyani
Ukufaka amabali ongezelelweyo
Izigaba: Hulu Amazon-Prime Tech-Iindaba
hanna battah fox iindaba ezi-4
Ngaba intshontsho-livulekile ngosuku lomsebenzi
shane kilcher ngexabiso elifanelekileyo
inkwenkwezi yetrek imovie yewiki
Wwe smackdown iziphumo abaphumeleleyo kumabanga
I-star trek voyager endgame enye indlela yokuphela